Global Voices teny Malagasy » Mumbai sy ny horohoro: Ny ampitso · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Novambra 2018 4:29 GMT 1	 · Mpanoratra Neha Viswanathan Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsimo, India, Ady & Fifandirana, gazety, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Nanaitra ny firenena iray manontolo ny fanafihana tamin'ity halehibeny ity. Raha tsy vahiny amin'ny fipoahana baomba sy fanafihan'ny mpampihorohoro i India, dia tsy nampoizina ny toe-javatra momba ny takalon'aina naharitra ela be tao amin'ny toerana malaza iray. Ny fanodinana ny zotra-piaramanidina tamin'ny taona 1999  no takalon'aina farany notantaraina betsaka.
Ao amin'ny Mumbai Metblogs , mamelatra ny zava-nitranga nandritra ny andro iray sy mihoatra i ideasmith.
Efa ho atoandro, nisy tabataba tampoka toa naneho fa misy ny andiana tifitifitra vaovao tao amin'ny toby C.S.T. ary nalaina ireo takalon'aina. Saingy toa tsy marina izany. Raha ny marina, dia nisy olona naheno feo toa tifitra basy ary raiki-tahotra izy.
Folo minitra monja, dia naheno feo tahaka ny fipoahana aho. Nitsambikina aho saingy tsy niraharaha izany. Roa minitra taty aoriana dia nisy iray hafa indray. Nitraka aho mba hijery raha nisy nandre izany. Saingy tsy nisy nahita izany. Niady hevitra fotsiny aho raha tokony hiverina any amin'ny biraoko (ao amin'ny zoro iray amin'ireo birao ka izaho irery no afaka mandre izany) na milaza amin'ny olona (ary mety hiteraka tahotra hafa). Nisy olon-kafa koa nandre izany tany ambony ary niantso anay mba hijery izany. Nihazakazaka tany amin'ny terasy izahay, midobodoboka ny fo. Kanefa tsy inona fa ireo mpiasa isan'andro miasa ao amin'ny toerana fanorenana eo akaiky. Whhhewwwww.
Ao amin'ny Twitter, manome fanampim-baovao tsy tapaka i prempanicker . Raha ny heviny, dia maneho ny haavon'ny fikorontanana izany. Isaky ny adiny roa, misy ny karazana fanambaràna fa voafehy ny zava-drehetra, saingy avy eo, nisy ny tatitra momba ny fanafihana mitam-piadiana sy fipoahana maro.
code clicks n caffeine namoaka sary momba ireo roa andro farany – nalain'ny olona maro sy avy amin'ny loharano samihafa. John P Matthew  nibilaogy mivantana momba ny zava-nitranga tany Mumbai, miaraka amin'ny fandinihana ny fihetseham-pon'ny olona sy ny fitantaran'ny haino aman-jery.
Tao amin'ny birao misy ahy, misy feo mientanentana, miteraka ahihahy, momba ny fanafihana tao amin'ny toby VT izay tsy maintsy handalovako. Misy olona milaza fa ao amin'ny lalana ao ambany, mitifitra tsy ankanavaka ireo mpampihorohoro. Misy ny fisavorovoroana ao anatin'ilay trano ary vao mainka mampihorohoro ny mpiara-miasa iray noho ny tabatabany tsy voafehy amin'izay zavatra kely fantany. Mientanentana be loatra izy.
Kunal ao amin'ny Live's Short Live it Up  mibilaogy mivantana tsy tapaka ihany koa -
# Finday zanabolana GPS hita teny amin'ireo mpampihorohoro. Finday hafa ahitana karatra SIM vahiny hita teo akaikin'ny hotely Taj
# Nalain'ireo mpampihorohoro ny hazo fanjonoana
# Maty avokoa ireo mpampihorohoro rehetra tao amin'ny Taj hotel! [23:25]
# Milaza ny loharanom-baovao NSG fa mpampihorohoro iray naratra no mbola tafahitsoka ao amin'ny Taj hotel
# Takalon'aina maro no voavonjy tao amin'ny Nariman House. Olona 15-17 no nivoaka ny trano Nariman amin'izao fotoana izao
# Fipoahana 25 tao amin'ny hotely Taj tao anatin'ny 24 ora
# Andiana tifitifitra vaovao ao amin'ny Taj hotel.
Miharihary fa toa manjaka tanteraka ny fisavorovoroana, ary tsy dia mazava loatra ny toerana mikasika ireo mpampihorohoro sy ny takalon'aina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/08/129241/
 fanodinana ny zotra-piaramanidina tamin'ny taona 1999: http://en.wikipedia.org/wiki/IC_814
 Mumbai Metblogs: http://mumbai.metblogs.com/2008/11/28/the-day-after-its-not-over-as-yet/
 code clicks n caffeine : http://blog.sanyam.co.in/2008/11/27/mumbai-terrorist-attack-26-11-in-photos/
 John P Matthew: http://johnpmathew.blogspot.com/2008/11/live-blog-bombay-under-siege-xiv.html
 Live's Short Live it Up: http://www.kunalsheth.in/general/terrorists-attack-mumbai-bombay-nov-27th-2008